ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 |4၏စာမျက်နှာ 41 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 4)
20,000-ကီလိုမီတာအဝေးမှထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်မှုများသည် IMG နှင့် Telstra နှင့်အတူမြက်ချိုင့်မိတ်ဖက်
Montreal - 8: 00 EST ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2019 - မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ်, ဝေးလံခေါင်သီသော IP ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဦးအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူဦးဆောင်အကြောင်းအရာအတွက်ကစားသမားများနှင့်မီဒီယာနည်းပညာအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုအလေးပေးထားသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ IMG Studios က '' တစ်ဦး XCU အခြေစိုက်စခန်းဘူတာနှင့်အတူ Telstra ရဲ့တိုကျိုရုံးခန်းအခြေစိုက်ကင်မရာများကနေဝေးလံခေါင်သီ link ကို၏အောင်မြင်သောသေဒဏ်စီရင်ကြေညာလိုက်ပါတယ် ...
ဆူမီတိုမိုလျှပ်စစ်နှင့် Cable ကို TV ကစာတမ်းဖတ်ပွဲအပေါ်မီဒီယာ Links များ Partner
ဖိုရမ်အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် switching နည်းပညာကိုကျော်မီဒီယာအတွက် CATV Insights, စီးပွားရေး Trends နှင့် New Technology မှမီဒီယာ Links များ, နည်းပညာတက္ကသိုလ် & အင်ဂျင်နီယာEmmy® Award ဆုရှင်နှင့်ရှေ့ဆောင်တင်ပြပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဂျပန်အခြေစိုက်ဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်ဆူမီတိုမိုလျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. မည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, Ltd. , မတ်လ 13, 2019 ရက်နေ့တွင်, ဟိုတယ် Granvia ဟီရိုရှီးမား, ဂျပန်မှာနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမည်။ အဆိုပါ ...
Premiere Pro ကိုအငယ်တန်း Editor ကို
ရာထူး: Premiere Pro ကိုအငယ်တန်း Editor ကိုကုမ္ပဏီ: တစ်ခုမှာဖျော်ဖြေမှုမီဒီယာတည်နေရာ: Los Angeles မြို့, CA အမေရိကန်ပို >>
2019 #NABShow: Artificial Intelligence: ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့သောအနာဂတ်သည်ယခုလက်ရှိဖြစ်သည်
ပလက်တီနမ်Tools®6NAB Show မှာနယူး Shield Cat7A / 45 RJ2019 ရွေ့ပြောင်း Connectors တင်ဆက်ပေးတယ်
အခုတော့ရရှိနိုင်သည့် Connectors က Round စိုင်အခဲသို့မဟုတ်သောင်တင်, 28 ရပ်ဆိုင်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည် - 26 AWG, Cat6A /7ကွန်ယက် Cable ကို; တွေ့ဆုံနှင့်ကျော်လွန် 10Gig စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများ NEWBURY ပန်းခြံ, ကာလီဖိုးနီးယား, ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2019 - ။ ပလက်တီနမ်Tools® (www.platinumtools.com), ဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး၏ပြင်ဆင်မှု, တပ်ဆင်ခြင်း, လက်စဲခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်, မာနထောင်လွှားဖြစ်ပါသည် ကြေညာဖို့ကပြပါလိမ့်မယ် ...
CABSAT 2019 မှာ Broadpeak ထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါဗီဒီယို streaming များစျေးကွက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားတွေ့ကြုံခံစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ပိုများသောသန်း 310 ထက်ချိတ်ဆက်အိမ်ထောင်စုပန်းခြံ Associates မှကနေမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာအရသိရသည် 2024 အားဖြင့်အနည်းဆုံး OTT ဝန်ဆောင်မှုရပါလိမ့်မယ်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးနဲ့ပေးဆောင်-TV ကိုမှအော်ပရေတာအားလုံးဖန်သားပြင်ကိုဖြတ်ပြီးအတှေ့အကွုံတစ်ဦးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအရည်အသွေးကိုသေချာကြောင်း၏အရွယ်မှာ, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ပါတယ်။ ပဲဖြစ်ဖြစ် ...
FCC နှင့်အတူ Dielectric အစည်းအဝေးနိုင်သည့်အလားအလာ, Repack အဆင့်ပြီးစီးကိစ္စများအမှာစကားပြောကြား
ဆောင်းရာသီမိုးလေဝသနှောင့်နှေး, repack အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏အောင်မြင်သောပြီးစီးကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကားမောင်းထိပ်တန်းကိစ္စများအကြားသင်္ဘောသားရှားပါးမှုအကြံအဖန်မျှော်စင်; NAB Raymond, မိန်းဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2019 မှာအရန်အင်တင်နာဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြ Dielectric - Dielectric အခြားအသံလွှင့်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ repack site ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ update ကိုပေးဖို့ FCC သည်ယ့လေလံ Task Force နှင့်မီဒီယာဗျူရိုနှင့်အတူတစ်ဦးဇန်နဝါရီလ 31 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည် ...
ထုတ်လွှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါရင့်, Andrea Berry ဟာ PRG ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Los Angeles - ထုတ်လုပ်မှု Resource Group ရဲ့ LLC (PRG), ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဖြစ်ရပ်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးကြောင်းထုတ်လွှင့်မီဒီယာဝါရင့်ကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည်, Andrea Berry ဟာအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌနှင့် General Manager က, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုခုနှစ်, Berry ဟာ PRG ရဲ့တိုက်ရိုက်အားကစားနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များနှင့် script များနှင့် unscripted ရုပ်မြင်သံကြားအသင်းများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမည်ဖြစ်သည်။ ...